May 2012 - पेटबोली ...!
Monthly Archive:: May 2012	Sort Posts by:
खै सबैले भन्छन्: यो एक्काइसौं शताब्दी हो। किन भनेका हुन् था’छैन मलाई तर पनि म पनि भन्छु यो एक्काइसौं शताब्दी नै हो। मैले भने पनि नभने पनि, तपाईंले माने पनि नमाने पनि यो हो त एक्काइसौं शताब्दी नै। कसरी प्रमाणित गर्छस् भनेर तपाईं सोध्नुहुन्छ मलाई था’ छ।	Tweet
‘गोजी यन्त्र’ यात्रा
बिए तेस्रो वर्षमा पढ्दै थिएँ पहिलोपटक ‘गोजी यन्त्र’ किन्दा। यो ‘मिडिल क्लास’ हुनुको फाइदा। आफूलाई मन लागेको कुरा किन्न सधैं आफ्नै योगदान रहन्छ। मलाइ थाहा छैन मेरो बुबाले मलाइ घडीसम्म किनेर दिएको। घडी, मोबाइलजस्ता कुरा माग्‍नुपर्दा जवाफ पहिलानै थाहा हुन्थ्यो- ‘आफैं कमाउने अनि मन लागेको कुरा किन्ने।’	Tweet
दुई जोइका पोई भानुभक्त
हामी अनुसन्धानमा एकदमै पछाडि छौं। किनकी हामीलाई इतिहासप्रति चासो नै छैन। हुन पनि हो किन सम्झिने इतिहास? यहाँनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा भनाइ याद आउँछ: ‘मान्छेले आफ्नो इतिहास बिर्सियो भने त्यो मान्छे रहँदैन, पशु हुन्छ’। (गिरिजाप्रसाद कोइराला: आफ्नै कुरा) हुनत इतिहास सम्झिन इतिहासको अध्ययन जरूरी छ तर हामीकहाँ	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला